ပိုကောင်းတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်မရှိပါ။ Feed Readers ၅၀၀! | Martech Zone
ပါဝင်မှု, စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ, အရှိန်အဟုန် ... ဤအရာဖြစ်ကြ၏ ဒြပ်စင်သုံးခု ငါဘလော့ဂ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါ့ဖောက်သည်တွေကိုပြောတယ် အချို့လူများက blogging သည် narcissistic ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဟုထင်မြင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် blogging အောင်မြင်မှုအကြောင်းပြောသောအခါ။ ပိပက္ခဆိုတာတကယ်တော့မင်းကမင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ မဟုတ် အောင်မြင်ပြီလား ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များကို တင်၍ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ခေါင်းစဉ်များ၏အောင်မြင်မှုကိုသက်သေပြနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် Technorati ရာထူးနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထားပေးပါသည်။
မနက်ဖြန်ကျွန်တော့မွေးနေ့။ ကျွန်တော်မကြာခဏတိတ်ဆိတ်တယ် ငါ့မွေးနေ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသမိုင်းမှာကံဆိုးတဲ့နေ့ပါ မကြာသေးမီအချိန်က၎င်းသည်တစ်ပါတ်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာသည် (ယခုအဖြစ်အပျက်များစာရင်းကို Virginia Tech ကိုထည့်ပါ) ။
ဒါပေမဲ့၊ ကျွန်တော်ဒီဂရပ်ကိုရေးပြီးမကူညီနိုင်ဘူး။ ကောင်လေးတစ်ယောက်တောင်းနိုင်တဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ငါ့ကလေးတွေနှင့်အပြင် AppleTV ကြောင်းဘီလ်နှင့် Carla ရတယ်
ငါသည်ငါ့ feed ကိုယနေ့ 500 ကျော်စာဖတ်သူများ hit!
န်းကျင်ကပ်များအတွက်လူတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်က ငါသည်ငါ့ 500th ပို့စ်တင်သွင်းခဲ့သည်။ ငါကြီးမြတ်တည်ဆောက်ရန်ဆက်လက် အကြောင်းအရာကြှနျတေျာ့ စှဲလနျးခွငျး အစဉ်အဆက်ကဲ့သို့ခိုင်မာသည်နှင့် အရှိန်အဟုန် ၏ Blog ကိုဆက်လက်! some ည့်သည်များ၏ ၁% သာအမှန်တကယ်မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်ဟုတစ်နေရာရာမှာကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ မင်းကရှက်တတ်ပြီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီကိုငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာပဲသိထားပါ။
အရေးကြီးသောမှတ်စုတစ်ခု အထူးကျေးဇူးတင်စကား ယောဟနျသ Chow ကျွန်တော့်ရဲ့စာဖတ်သူတွေကိုပိုပြီးစာဖတ်သူတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့အပြောင်းအလဲတချို့လုပ်ဖို့ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ဆောင်းပါးပါစာသားလေးကကျွန်တော့်ကိုကျွေးမွေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်၏ကျွေးမွေးမှုအတွင်းအခမဲ့ hosting အတွက်တစ်နှစ်အတွက်ကြော်ငြာတစ်ခုပေးပါတယ်။ ဂျွန်၏အကြံပေးချက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ RSS မွေးစားခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် John!
Tags: John Chowစာဖတ်သူRSS ကိုနည်းပညာအောင်ပွဲ
ဧပြီ 18, 2007 မှာ 8: 16 pm တွင်
၅၀၀ နှင့်အစောပိုင်း Happy Birthday အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဧပြီ 18, 2007 မှာ 8: 43 pm တွင်
ဧပြီ 18, 2007 မှာ 8: 35 pm တွင်
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်၊ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ထိန်းထားပါ။ သင်ဟာအချိန်ကာလ ၁၀၀၀ ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဧပြီ 18, 2007 မှာ 10: 52 pm တွင်
lvl အပေါ် gratz
ဧပြီ 18, 2007 မှာ 10: 56 pm တွင်
ဧပြီ 18, 2007 မှာ 11: 41 pm တွင်
James Kingsted - Domain ကိုအသိပေးပါ
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 1: 23 AM
ငါမကြာသေးခင်ကမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုစဖတ်ခဲ့ပြီးအဲဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ် မင်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရင်းအမြစ်ရှိတယ်ဆိုတာငါယုံကြည်တယ်။ 500th တစ်အံ့သြဖွယ်အရာဖြစ်၏။ မင်းရဲ့အနာဂတ်ပို့စ်တွေကိုဖတ်ဖို့ငါမျှော်လင့်နေတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ။
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 7: 59 AM
ကြင်နာသောစကားလုံးများအတွက်ဂျိမ်းစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်ချက်အမြဲကြိုဆိုသည်။ 🙂
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 2: 58 AM
ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ သင်၏ ၂၉ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
... နှင့် Technorati ၌ကြီးမားသောမွေးနေ့ကိတ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်မကြာမီထိပ်တန်း -2500 ဖြစ်သည်။
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 7: 56 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာတင်။ မင်းက ၁၀ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတူတစ်ခုမှာ ဦး တည်ချက်, ရင့်ကျက်နှင့်အတူ။ ငါသျောလညျးသောအရာကိုမပြောလိမ့်မည်! 🙂
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 4: 33 AM
တကယ်တော့ Doug ဂုဏ်ယူပါတယ် ..
feed reader ၅၀၀ သည်မရိုးသားသောလုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်သင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုသာပြသည်။
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 7: 38 AM
ဂုဏ်ယူပါတယ်! ဒါကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါ! BTW, ဒါကတကယ့်ကိုလှပတဲ့ကြီးထွားမှုကိန်းတစ်ခုပါ။
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 7: 58 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thor ။ တိုးတက်မှုနှုန်းသည်အခြားအရာအားလုံးထက် ပို၍ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်သက်သေဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ငါတကယ်တော့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များနှင့်နေရာချထားနှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပို့စ်အရေအတွက်၏အချို့သောစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလျှောက်ထားချင်ပါတယ်။ ငါအကောင်းတစ် ဦး ဆက်စပ်မှုရှိသေချာပါတယ်။ တစ်နေ့ကျရင်ငါသင်္ချာလုပ်မယ်။
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 9: 03 AM
Happy Birthday နှင့်နံပါတ် ၅၀၀ အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင်ပြုသောအမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 11: 16 AM
Doug, ဂုဏ်ယူပါတယ်။ လုံးဝထိုက်တန်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏ site နှင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာကိုချစ်ကြတယ်။ ကြီးစွာသောအလုပ်တက်ထားပါ။ နှင့်အညီ, Happy Birthday ။
ဧပြီ 19, 2007 မှာ 12: 05 pm တွင်
ဟေ့ Doug - သွားစရာလမ်း! သင်ပေးသောအကြောင်းအရာများအပေါ် မူတည်၍ လမ်း ၁၀၀၀ သို့လျင်မြန်စွာရောက်လိမ့်မည်ဟုငါဆိုသည်။